Lokhu kuqinisekiswa ngokusemthethweni: i-2017 iyoba yonyaka wokubuyiselwa kwetheyishi ethandwa kakhulu eminyakeni engu-90. Njengama-chokers, iziqongqo nezimbadada ezisepulatifomu eziyingxenye ebalulekile yezingane kanye nentsha yama-90, uTamagotchi ubuyela emakethe. I-Bandai, inkampani yaseJapane eyabangela ukulimala okuhlobene nekhomishini yama-computer ephaketheni eminyakeni engamashumi amabili edlule, yakhipha umdlalo eJapane owawuklanyelwe ngendlela efanayo neTamagotchi (inguqulo ye-classic ene-pexel elula yesikrini), futhi kancane kancane isakazeka emhlabeni jikelele . Uma ufuna ukukhumbula ingane, khona-ke kufanele uqale ukuqoqa izimali zokuthenga le ithoyizi elimnandi. Futhi ungakhohlwa ukuthenga okwakheke okuthile okuyinhloko, ukuze ukuzwa kwamaphesenti angu-90 kube ngaphezulu.
Ngokokuqala ngqa ithoyizi ethandwayo yakhululwa yi-Bandai ngo-1996 eJapane, futhi ngemva konyaka kwavela e-US futhi yaqala ukusabalalisa. Kusukela ngaleso sikhathi, izingane, intsha kanye nabantu abadala baye balinda ngokulangazela iqanda labo elibonakalayo ukuze lihlwithe, futhi isilwane esithombisiwe esithombeni sizovela (ngamanye amazwi, kwakuyihluzo zephikelli). Abasebenzisi kwakudingeka bakondle isilwane, badlale nayo bese behlanza emva kwayo, besebenzisa izinkinobho ezintathu zenjoloba emzimbeni wesitokisi. Futhi uma othile engazange azalise imithwalo yemfanelo yabazali, isilwane sakhe esilungile sagcina sigula.
Ukuba khona kukaTamagotchi emakethe
Lena akuyona imvuselelo yokuqala yeTamagotchi. Eqinisweni, leli thuluzi lokudala alizange liphele ngempela emakethe. I-Bandai ikhishwe imikhiqizo eminingana eyithuthukisiwe ngaphezu kweminyaka, kufaka phakathi amamodeli anombukiso wombala, amamodeli avumela abasebenzisi ukuba bakhule imindeni yonke yezilwane ezifuywayo, kanye nesicelo esikhethekile samafoni e-iPhone.
Iyini isisekelo salesi simodeli esisha?
Naphezu kwezimpawu ezingekho kanye nosayizi omncane, inguqulo ekhishwe ngo-2017 yeTamagotchi ihlala iqinisile ekuqaleni, njengoba inombukiso we-monochrome kanye nezilwane ezifuywayo eziyisithupha, phakathi kokunye ongakhetha kukho eminyakeni engama-90. Ngeshwa, namuhla imodeli entsha yeTamagotchi iyatholakala kuphela eJapane. Ngakho uma ufuna ukukhumbula intsha ngokushesha ngangokunokwenzeka, kufanele ufunde okuqukethwe kwekhamera yakho ngezinto ezindala. Noma ungazama ukuthenga ithoyizi ngokuqondile eJapane, kodwa kufanele kuqondwe ukuthi ukulethwa kwezidingo ngaphandle kwezwe akukwenziwa. Kodwa uma ufuna ngempela ukuthola leli thoyizi, khona-ke uzothola indlela!